C4 Injini injini yemifananidzo yevhidhiyo mavhidhiyo anowanikwa kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
C4 Injini iri yakasimba yemitambo programming suite iyo inowanikwa yeWindows, Mac OS X, Linux, Play Station 4 uye Play Station 3. Nenzira, usavhiringike kubatana ine yakakurumbira Canonical chirongwa cheUbuntu, mune ino iri vhidhiyo mutambo injini ine zita rimwe chete. C4 Injini haina yemahara, ndeyaTerathon Software, asi zvakadaro zvinonakidza kune programmers vanoshanda paLinux. C4 Injini yakavambwa naCalifornian Eric Lengyel, grafiki injini yekuvandudza ane ruzivo mu3D, mifananidzo, uye mimwe minda
NeC4 Injini iwe unogona gadzira mitambo yemavhidhiyo kune ese mapuratifomu ataurwa pamusoro uye ane zvakanakira kupfuura Leadwerks uye Kubatana 3D. C4 Injini ndeye suite yekugadzira yemitambo inomhanya kwazvo paLinux masisitimu, ayo vamwe vasingaiti. Chiedza chinogona kugadzirwa neiyi injini yemifananidzo yakanaka kwazvo, dhizaini yayo yakakosha kuwana yakachena uye yakavimbika sosi kodhi, mupepeti waro une chinongedzo chine simba chizere nematurusi ebasa uye zvimwe zvakawanda zvakafadza zvinhu zvinogona kuenderera kuverengerwa neyavo mabhenefiti, asi izvo zvakawandisa kunyora pano. Uye zvakare, C4 Injini yaisakwanisa chete kushandiswa kugadzira 3D vhidhiyo mitambo, asi kugadzira mamwe marudzi eanowoneka simulation.
C4 Injini yakatove yakashandiswa kugadzira vhidhiyo mitambo yeiyo chimiro che Ye 31 Haunted uye sezvaungaona muvhidhiyo inosanganisirwa muchinyorwa, iwo magirafu akagadzirwa neiyi injini yemifananidzo akanaka chaizvo. Kana iwe uri vhidhiyo dhizaini dhizaini uye iwe unoshandisa Linux, iwe unogona ikozvino kugadzira yako wega zita ne C4 Injini.
Mamwe mashoko - Kubatana 3D 4.1 Game Injini inogadzira mitambo yeLinux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » C4 Injini, ingangoita imwe nzira yeUnited 3D uye Leadwerks